Echiche ịchọ mma DIY maka ime ụlọ | Crafts On
Crafts Na | 25/09/2021 10:22 | Ọrụ ụlọ
Maka icho mma nke ime ụlọ ị nwere ike họrọ n'etiti ịzụrụ ihe dị iche iche ịchọrọ itinye, dị ka a oche ma ọ bụ oriọna okpokoro, yana maka imepụta iberibe nke gị. N'isiokwu a anyị na -ahụ ụfọdụ Echiche ịchọ mma DIY maka ụlọ ihi ụra nke ị ga -eji aka gị mee iji metụ aka n'ọnụ ụlọ ahụ dị nso.
1 Ihe mkpuchi mkpuchi
5 Nka mgbidi
7 Mgbidi ọkụ
8 Eweghachiri arịa ụlọ inyeaka
na fom na-ekpuchi Ha nwere ike ịdị nfe ime ma ọ bụ karịa karịa, dabere na mmasị gị. Na karịa ihe niile, enwere ike ịhazi ya nke ukwuu. Ọzọkwa, ịkwesighi ịzụta ihe mkpuchi ọhụrụ, naanị wepụ ihe mkpuchi ochie ma ọ bụ kpuchie ihe mkpuchi ahụ n'onwe ha.
Ahịhịa ndị dị irè na, na mgbakwunye, na cama ọ ga -adị ezigbo mma. Ị nwere ike inwe ọtụtụ nke ị chọrọ. Ị nwekwara ike gbanwee mkpuchi ka ọ dabara na oge nke afọ ma ọ bụ ihe omume ịchọrọ igosipụta na ihe ịchọ mma, dịka ekeresimesi, Halloween, ụbọchị Valentine, wdg.
Ọ bụrụ na ị na -eji ákwà ngebichi ị nwekwara ike mee ha n'onwe gị. Ha dị mfe ịgbanwe, enwere ike jikọta ya na ihe ndozi akwa ndị ọzọ, gụnyere mkpuchi kwushin. Agbanyeghị na ịgbanwe ha na -ewe ntakịrị ọrụ, ị nwekwara ike ime ya dịka oge nke afọ ma ọ bụ mgbe ịchọrọ inye ụlọ ime ụlọ ikuku ọzọ.
Isi oche nke akwa bụkwa a ime mma mmewere na ị nwere ike ịme onwe gị. Ị nwere ike iji textiles mee ya ka ọ dabara na ihe ndị ọzọ, jiri ihe emegharịrị, họrọ ihe osisi, wdg.
Ndị ọzọ Ihe ịchọ mma DIY nke ị nwere ike imere onwe gị bụ oriọna, ma uko ụlọ ma ndị enyemaka tebụl ndị ọzọ. Ị nwere ike ijikọ ya n'ụzọ dị mfe na ihe ndị ọzọ ị mepụtara ma ọ bụ ndị ọzọ ị zụtara, ma ọ bụ jiri naanị ihe dị iche. Ị nwere ike iji eriri eke ma ọ bụ ihe eji emegharị emegharị, yana akwa na ihe ndị ọzọ mara mma, ma ọ bụrụ na -ịchọrọ.
Anyị na -ekwu nka nka n'ihi na okwu a dabara ihe ọ bụla ị nwere ike kwụdo, site na eserese gaa na foto ruo na mosaics textiles, ihe okike, ihe geometric, garlands, ndị na -arọ nrọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike iche maka ya, dị ka nnukwu ihe. site na ihe arụgharịrị. Ị nwere ike iji ụdị, ihe yana yana ọkụ wee gwuo egwu.
Poufs bụ ihe eji achọ mma nke bara ezigbo uru. N'ime ime ụlọ, dabere n'ịdị elu na ọdịdị ha, enwere ike iji ha dị ka akwa akpụkpọ ụkwụ, dịka ihe inyeaka ịnọdụ ala ma ọ bụ ịhapụ akwa na ị ga -eyi. Ma ị nwere ike ịme ha n'onwe gị. Naanị ị ga -ahọrọ ụdị ahụ wee malite ịrụ ọrụ.
Kama iji oriọna inyeaka ma ọ bụ dị ka ndị na -akwado ndị a ị nwere ike dobe ibe obere ọkụ ọkụ na mgbidi na -akwụdo nke ọma, n'etiti arịa ụlọ na ihe eji achọ mma nke ime ụlọ. Ị nwere ike nweta nsonaazụ dị egwu ma mepụta ikuku mara mma.
Eweghachiri arịa ụlọ inyeaka
Ị nwere ike weghachi ihe ochie ma nye ha ọdịdị kacha masị gị. Ị nwere ike nye ha ikuku ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ nke nkịtị, ma ọ bụ weghachi ha n'ụdị ịke. Ị nwere ọtụtụ nhọrọ, site na shelf ruo tebụl dị n'akụkụ àkwà, na -aga na enyo, shelves mgbidi ma ọ bụ ihe ndị kwụgburu, tebụl akụkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ọrụ ụlọ » Echiche ịchọ mma DIY maka ụlọ ihi ụra